Okokwenza e-Manyane Resort - Ukubuka Indawo nezilwane
Okokwenza e-Manyane Resort
Izindwendwe kanye nezinkomfa zingakwazi ukujabulela imisebenzi eminingi e-Manyane Resort futhi zibeke kahle emdlalweni omkhulu wezemidlalo eduze neSun City.
Manyane inikeza ukuthula nokuphumula. Imisebenzi kule ndawo yasePilanesberg ihlanganisa i-mini-igalofu, indawo yokudlala yezingane, uhambo lwe-Aviary, self-drive noma olwenzelwe umdlalo we-safari eduze ne-Sun City nendawo yokuhamba ngezinyawo. Ezinye izinto eziningi ezijabulisayo zitholakala ePilanesberg National Park.
Ukuhamba ubuka izilwane
I-Manyane Resort inendlela ehamba phambili ehamba phambili ehlinzeka ngemfundo yezemvelo kanye nokubukwa kwemidlalo nokubuka izinyoni. Futhi e-resort yi-aviary yokuhamba ngezinhlobo ezingu-80 zezinyoni zomdabu. Abathandekayo bezinyoni bangakwazi ukungena ePilanesberg National Park lapho kunezinhlobo ezingaphezu kuka-300 ezizobonakala.
Izivakashi e-Manyane ziyakwazi ukujabulela i-Big Five safari eduze ne-Sun City e-National Park futhi ibone izinhlobo ezihlukahlukene zezilwane zasendle nezindawo ezithakazelisayo ezungeze intaba-mlilo engapheli. I-Pilanesberg ikhona ngaphakathi kwendawo yokushintshanisa phakathi kweKalahari eyomile nasezindaweni eziphansi ze-Lowveld, okubizwa ngokuthi yi-bushveld. Ukuqoqwa okuhlukile kwezilwane ezincelisayo, izinyoni nezimila kwenzeka ngenxa yalolu shintsho.
Ukubuka Indawo nezilwane
Izivakashi zinikeza amathuba amaningi okubuka umdlalo ngemoto eqondiswayo eqhutshwa yizingcweti zengcweti ezihamba kabili nsuku zonke nasebusuku Izivakashi eziziphetheyo zingalandela imigwaqo emihle kakhulu engamamitha angu-200 ePilanesberg National Park. Izikhumba ezihlukahlukene kanye nezindawo eziphambili zepikinikini zivumela izivakashi ukuba ziphume emotweni bese ziphumula emvelweni.
I-Manyane Resort ine-conference enhle kakhulu, egcwele inkomfa. Imibuthano encane noma izenzakalo ezinkulu, ithimba lochwepheshe lochwepheshe lisiza nazo zonke izigaba zenqubo yokuhlinzeka ngemisebenzi yomuntu siqu nokunakekela imininingwane. I-Manyane Resort inezindawo ezingu-3 zokuzikhethela. Indlu yeNtsu ingahlala kuze kube ngu-80, i-Functions Room ingahlala kuze kube ngu-80 futhi uMoe angakwazi ukuhlala kwabangu-20 abahlala phansi. Izihambeli zinokufinyelela kumishini ejwayelekile nezihambile kanye nesistimu ye-PA.
Ukushayela imoto yosuku nosuku
izintaba ezihamba ngezinyawo
Umshayeli wegeyimu ne-barbeque yamahlathi noma ibhulakufesi
Izikhathi zokuxhumana zendlovu
I-quad ngebhayisikili eseduze ne-Letsatsing Game Park
Ukushisa amajuba ukudubula
Uhhafu-usuku lwemisebenzi ehlanganisiwe
I-Sun City ezikhangayo - igalofu, i-superbowl, i-casino, i-waterpark, i-Lost City